Cybersex အတွက် တသက်တကျွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Cybersex အတွက် တသက်တကျွန်း
Cybersex အတွက် တသက်တကျွန်း
Posted by Zaw Wonna on May 12, 2011 in News, South East Asia | 23 comments
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ မိန်းကလေးတွေကို အင်တာနက်ကနေ Live webcam နဲ့ ဖော်ချွတ်ပြသစေပြီး ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ စီးပွားရှာနေတဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံသား နှစ်ယောက်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား သုံးယောက်ကို ထောင်ဒါဏ် အနှစ် ၂ဝ စီ ပြစ်ဒါဏ်ချလိုက်ပါတယ်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အသက် ၃၁ နှစ်ရှိ Bo Stefan Sederholm နဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ Emil Andreas Solemo တို့ကို ထောင်ဒါဏ် အနှစ် ၂ဝ နဲ့ ငွေဒါဏ် ဒေါ်လာ ၄၆၀၀ဝ စီ ကျခံစေပြီး ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ၃ ဦးကတော့ ထောင်ဒါဏ် အနှစ် ၂ဝ နဲ့ ငွေဒါဏ် ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ဝ စီ ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အသက် ၁၉ နှစ်ကနေ ၂၄ နှစ်အတွင်း ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး ၁၈ ဦးကို တစ်လ ဒေါ်လာ ၃၅ဝ ပေးပြီး သရုပ်ဆောင်စေခဲ့တာပါ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဥပဒေအရ တရားမဝင်တဲ့ ဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွေဟာ အမြတ်အစွန်း များပြားတဲ့အတွက် တိုးပွားလာနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကော်နက်ရှင် အခက်အခဲရယ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်တွေ မသုံးနိုင်သေးတာရယ်ကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းမျိုး မရှိသေးဘူးလို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း အဝတ်လဲခန်းတွေ၊ တည်းခိုခန်းတွေမှာ လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်ထားပြီး အင်တာနက်ကနေ ဖြန့်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့ ခဏခဏ ကြားရပါတယ်။ စီးပွားရေး အရလား၊ ဝါသနာပါလို့ အပျော်တမ်း လုပ်တာလား မသိပေမယ့် ခံရတဲ့ လူတွေအတွက် အရမ်းနစ်နာပြီး အင်မတန်မှ အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးမို့ သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူ သင့်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ ဘယ်လို သတ်မှတ်ထားတယ် ဆိုတာကိုတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပေါ်က လူတွေထက် ပြင်းထန်တဲ့ အပြစ်ဒါဏ် ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ။
ခေါင်းစဉ်အတိုင်း ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်းလည်း မဟုတ်ပဲ အနှစ် ၂ဝစီပဲ ကျတာကို … ။
မူရင်းသတင်းမှာ “2 Swedes Get Life Sentences for Philippines Internet Porn “ လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားလို့ အလျဉ်းသင့်သလို ဘာသာပြန်လိုက်တာပါခင်ဗျာ ….
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း တသက်တကျွန်းဆိုတာ ထောင်ဒါဏ် အနှစ် ၂ဝ လို့ပဲ သိထားပါတယ်။
ထောင်ဝေါဟာရ အရတော့ ကျွန်းလေးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်းကြီးကတော့ လွတ်ရက်မရှိပေါ့။
မှားတယ်ထင်ရင်လည်း ပြင်ပေးကြပါ ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်လား…ကျမကသိပ်နားမလည်ပါဘူး တသက်တကျွန်းလို့ဆိုလိုက်လျှင် လွတ်လမ်းမရှိဘူးလို့ မှတ်ယူထားလို့ပါ… ။
ဆူးလည်း ကြားဖူးတယ် တသက်တကျွှန်း ဆိုတာ အနှစ် ၂ဝ လို့ ကြားဖူးသလို.. တကျွှန်းဆိုတာ ဟိုးအရင်တုန်းက ကျွှန်းပို့လိုက်ပေမဲ့ အခု ကျွှန်းပို့တဲ့ စနစ်မရှိတော့ဘူး။
ကောင်းပါတယ်။။ ဒီလိုမှတ်လောက်သားလောက်ပညာပေးမှဖြစ်မယ်။။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လျို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်တာမျိုးကို ကောင်းကောင်းလေးပညာပေး အရေးယူသင့်ပါတယ်။။ ဒါမှ online မသမာမှုတွေလျော့နဲသွားမှာပါ။။။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဝတ်လဲခန်းတို့ အိမ်သာတို့ ဟော်တယ်၊တည်းခိုခန်းတွေမှာ လျှိုဝှက်ကင်မရာနဲ့ ရိုက်တာတွေကို ထိရောက်စွာ အရေးယူသင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကားပေါ်မှာ ကားကြပ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မိန်းကလေးတွေကို စော်ကားတဲ့ အများအခေါ် ထောက်လှမ်းရေးဆိုတဲ့ လူစားတွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် ဝိုင်းဝန်းအရေးယူ သင့်တယ်။
တစ်ချို ့အင်တာနက်ဆိုင် တွေ ရဲ ့တည်ဆောက်ထားပုံက အခန်းလေးတွေ နဲ ့ဗျ ။ အခန်းငယ်လေးတွေ လုပ်ပေးထားတာ ။ အပေါက်ကိုတော့ ခန်းစီး လေး နဲ ့ကာပေးထားတယ် ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြိုက်သလို သုံးပေါ့ဗျာ ။ အနေဝေးနေကြရှာသော အိမ်ထောင်သည် များ ၊ ချိန်းတွေ ့ရန် နေရာရှာနေသော စုံတွဲ များ ၊ ဘာညာဘာညာ ချက်ချင်ကြသူ မိန်းကလေးများ အမြဲလို အသုံးပြု ကြတာ ကို တွေ ့ရပါတယ် ။ ဒီလို ဆိုင်မျိုးကြတော့လည်း သုံးရတာ ရင်ခုန်စရာ အကောင်းသား ပဲ ဗျို ့
သိသလောက်တေ့ာ ..သဲကန္တာရမြို ့တော် ..လပ်စ်ဗေးဂတ်မှာ..ဆာဗာထောင်ပြီး ..ဝဘ်ကင်မ်နဲ့ဖေါ်ချွတ်တာလုပ်ဖို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ထောင်က.. တရားဝင်လို့ထင်တယ်..
အမြတ်ခွန်တော့ မတရားပေးရတာမို ့… တော်တော်များများက.. တခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားလုပ်ကြတာ…။
အင်တာနက်ကင်မရာ(ဝက်ဘ်ကင်မ်) ၂ဖက်လုံးရှိရင်.. ဒီဖက်(ကြည့်ချင်သူ)ဖက်က..ချပ်တင်ဒါမှမဟုတ်အသံနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်း..ဟိုဖက်ကလိုက်လုပ်တာပါပဲ..။
မျက်နှာပြစရာမလို… ကိုယ်ထိလက်ရောက် လိင်ဆက်ဆံတာမပါတော့..မိန်းကလေးတွေ တော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့..။
အဲဒါ တမိနစ် ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ခရက်ဒစ်ကဒ်ကဖြတ်တယ်..။
ပရိပိတ်(ငွေကြိုပေး) ကဒ်တွေလည်း ရောင်းတယ်..။
ငါတို့ ယောကျင်္ားလေးတွေကျတော့ အချိန်အပိုင်းအလုပ်ရှားလိုက်တာ
ဒီမှာလဲ online Credit Card စနစ်ရှိရင်ကောင်းမယ်ဗျို့… ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး၊ ဖြစ်သင့်တာကို ပြောတာပါ… နည်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်ရင် အမြဲလိုလို ခေတ်နောက်ကျန်ကျန်နေလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဗျာ…
တစ်ခါတုန်းကတော့ ဘဏ်ကထုတ်တဲ့ Credit card ကိုင်ဖူးလိုက်သေးတယ်။ ကျမတို့လို Slim bag အိတ်ကြီးကြီး မလွယ်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ကဒ်ကလေးနဲ့ အရမ်းအဆင်ပြေတာပဲ။ မုန့်ဟင်းခါးကိုတောင် Credit Card နဲ့ ရမှ ဝယ်စားမယ်ဆိုပြီး အချင်းချင်း စနောက်တဲ့အထိ ပါပဲ။ ခုတော့လည်းလေ…………
သူတို့က ဘယ်က ပိုက်ဆံရတာလဲ …
အဲဒီကောင်မလေးတွေကို ကြည့်ချင်၊ ချတ်ချင်ရင် Member ကြေးပေးပြီး Member ဝင်ရတာရှိသလို တစ်ပ်တွေ ဘာတွေလည်း ပေးလို့ ရပါတယ်။ ငွေချေတာကတော့ ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ ပေါ့ ခင်ဗျာ ….
ရဲတွေလား..။ ရဲတွေလည်း ရဲတွေအလျှောက်..ရတာပေါ့..။
ကောင်မလေးတွေလား… ဆိုက်ဘာကနေကြည့်တဲ့သူတွေဆီက..တမိနစ် ၅ဒေါ်လာတောင်းတယ်ဆိုပါတော့..။
၁ပုံ.. တခြားဆားဗစ်နဲ ့..ဝန်ထမ်းတွေလစာ
၁ပုံ -အမြတ် ဆိုပါစို့…။
သူတို့က ဘယ်က ပိုက်ဆံရတာလဲ … ဆိုတာလမ်းကြုံတော့မေးထားလိုက်ပါ့မယ်….. မမလေးရေ…..
သူတို့ကထောင်ကျသွားပြီလေ … လမ်းက ဘယ်နားမှာကြုံမှာတုန်းဟ … ထောင်ကို လမ်းကြုံလို့လား
ကောင်မလေးတွေကို မေးပေးမယ်လို့ naywoonni က ပြောတာပါ
သူက လမ်းမကြုံလည်း ကြုံအောင်သွားမယ့်ပုံပဲ
အဲဒီကောင်မလေးတွေကို နောက်ဒီလိုမလုပ်ဖို့ ဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်ပေးမလို့ပါ
(မှတ်ချက်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ အစမ်းလုပ်ခိုင်းလိုက် အုန်းမယ်ဗျ :D)
မြန်မာပြည် ဥပဒေအရ တစ်သက်တစ်ကျွန်း ဆိုတာ ပထမအကြိမ် (၁၅)နှစ် ၊ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ကျရင် (၂၅)နှစ် လို့သိရပါတယ်။
အခုလို ရှင်းပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
နည်းပညာတိုးတက်လာတာကောင်းတာရှိသလိုဆိုးတာတွေလဲရှိတာပဲ၊ အသုံးပြုတဲ့သူပေါ်မူတည်တာပဲ၊ ဥပမာ-မီးဟာအသုံးပြုတတ်သူတွေအတွက် မိတ်ဆွေပါပဲ၊သင်တို့မီးမရှိပဲတရက်နေနိုင်ပါသလား (မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးနော်)၊ မသုံးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ မီးလောင်ပြာကျသည်အထိ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်စေနိုင်တဲ့ရန်သူဖြစ်ပါတယ်။